Blog Juan Herranz
Nlebanya ihe nkiri. Ihe niile gbasara ihe nkiri kachasị mma nke ọtụtụ ndị nduzi, yana ọhụụ m na nkatọ nke ihe nkiri ndị na-eme ihe nkiri.
Ihe nkiri Ewan McGregor kacha elu
N'azụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sinima, e nwere ahịrị nke abụọ jupụtara na ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe nkiri na-achọsi ike ịbanye n'ọrụ iji dọpụta ọnụ ọgụgụ nke ebube cinematographic site na Pitt, Deep, DiCaprio na ụlọ ọrụ. Ewan McGregor bụ otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri siri ike. Onye ntụgharị okwu nwere ike…
Ihe nkiri atọ kachasị elu nke Russell Crowe
Ọ bara uru na Russell Crowe tụpụrụ oke iwe dị ka ihe enyemaka maka ọtụtụ ihe nkiri ya. Ma ọ bara uru na ọ dị ka a gbahapụrụ ya n'ụzọ anụ ahụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya (ma ọ bụ ya mere a na-ekwu n'ihu ihe nwere ike ịbụ nsogbu ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ọbụna ihe odide chọrọ). Mana ọ nweghị…
Ihe nkiri 3 kacha mma nke Javier Cámara
Ọ dị m ka sinima Spanish bụ nke onye kwuo uche ya, na-agbanwewanye ya na eziokwu nke omume ọma. N'iji ya tụnyere Hollywood, m pụtara. N'ihi na na yankeeland ma ọ bụrụ na ị mara mma ị nwere ike ịmụta ime ihe na ofufe, ka ọ dị ugbu a ị na-ama onye na-ekiri ya anya site na anụ ahụ gaa ...
Ihe nkiri 3 kacha mma Daniel Day-Lewis Movies
Ka oge na-aga, anyị ga-atụfu onye nwere ọgụgụ isi nke nkọwa dịka Daniel Day-Lewis. Ọ ga-abụ ihe gbasara ike ahụ nke o ji were ọrụ ọ bụla, isi ihe bụ na ọ nwere ike ịta ahụhụ site na uwe na akwa ahụ nke na-awakpo ndị na-ahapụ ihe niile n'akụkụ ọ bụla…
Ihe nkiri 3 kacha elu nke Robert de Niro
Ka anyị chefuo Robert de Niro ikpeazụ ka ọ kpalie onye na-eme ihe nkiri ọzọ na ọ nọ n'oge ụfọdụ. Ọ nwere ike ịdị ka ihe siri ike mana ọ bụ otu a, otu n'ime ụdị celluloid kacha mara mma ejirila mwute karịa ebube maka ihe nkiri na-enweghị isi ihe nkiri sinima ochie…
Ihe nkiri Jack Nicholson 3 kacha elu
Site na ezumike nka ọla edo ya n'ụkwụ nke egwu Lakers, Jack Nicholson ka na-egosipụta ike dị egwu ọ na-enye mgbe niile maka agwa ya. Nkọwa ndị na-apụta na 70s dị anya na nke mmụọ ruo mgbe nke ọma n'ime narị afọ nke XNUMXst. Ọsọ na-enweghị atụ na kpakpando nke taa...
Ihe nkiri Matt Damon kacha elu
Mgbe a bịara na katalọgụ Matt Damon anyị nwere ike ịchọta nsogbu. Ọ dịghị mfe ịkpọ nwoke dị ka ya, onye nwere ike ịfefe enyi gị nwata bụ onye ị na-agaghị echetụ n'echiche na-egwu dike nkiri na obere ụdị obi obi Brad Pitt. Ma ọ bụ…
Ihe nkiri atọ kacha elu nke Jennifer Lawrence
Onye na-eme ihe nkiri nke na-anakọta ndekọ nkọwa dị ka a ga-asị na omume ọma chameleon ya bụ ihe dị mfe itinye n'ọrụ. Obi abụọ adịghị ya na Jennifer Lawrence ga-amasị nnukwu onye nduzi nke afọ gara aga dị ka Hitchcock. N'ihi na n'ime ya, anyị nwere ike ịhụ ndabere a na-atụghị anya ya nke sinima na-achọ mgbe niile dị ka ihe ijuanya. Ihe…
Ihe nkiri 3 kacha mma nke Luis Tosar
Enwere ndị na-eme ihe nkiri zuru oke maka ụdị. Luis Tosar na enweghị ntụkwasị obi n'echiche ya sara mbara bụ otu n'ime ọhụụ kacha nwee obi ụtọ na sinima Spanish. Ma ọ bụ na onye na-eme ihe nkiri Galici a nwere ike itinye ihe ọjọọ n'ime ihe nnọchianya ya ọ bụla; ma ọ bụ n'ụzọ megidere,…
Ihe nkiri Keanu Reeves 3 kacha elu
O siri ike iche banyere Keanu Reeves ma tinye ya ngwa ngwa na stereotype nke onye na-eme ihe nkiri. Ma site na mkpebi nke ya, nke ọrụ chọrọ ma ọ bụ, n'ezie, site na mgbanwe mgbanwe, ezigbo Keanu na-emeghachi onwe ya mgbe niile n'ike ike. N'ime nwa nwoke nke foto ya kpuchiri ekpuchi…
Ihe nkiri 3 kacha mma nke Mario Casas
Mụ na Mario Casas ihe dị ịtụnanya na-eme m. N'otu aka ahụ, echere m na ọ bụ ezigbo onye na-eme ihe nkiri, ma n'aka nke ọzọ, otu àgwà a na-egosi m mgbe niile, n'agbanyeghị ọrụ m na-arụ. Ọ ga-abụrịrị okwu nke ọnụnọ ya ama ama ma ọ bụ ụda olu ya dị ala, dị ka mbọ ịgbasa ntanye ya…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji6 Ọzọ →
Ozi ndị ọzọ...
Peeji na-esote "